Vacuum qaboojiyaha-saareyaasha & Shirkado - Shiinaha Vacuum meeldhexaadka ah Factory
Cuntada la kariyey ee Vacuum Qaboojiyaha
Diyaar Garowga Vacuum Qaboojiye Sharax kooban
Teknolojiyada waxay ku saleysan tahay ifafaalaha ah in biyuhu bilaabaan karkarinta heerkulka hoose maadaama cadaadiska uu yaraanayo. Faakiyuumka faakiyuumka cadaadiska ayaa hoos loogu dhigayaa heer ay biyuhu ka bilaabmayaan karkarinta. Geeddi socodka karkarinta ayaa ka qaadaysa kuleylka cuntada. Saameyn ahaan, cuntada waa la qaboojin karaa iyada oo loo yareeyo cadaadiska qolka faakuumka.
Sidan oo kale, cuntada la kariyey waxaa laga qaboojin karaa heerkulka sare ilaa 10 ℃ gudahood 20 ~ 30min, cuntada la dubay waxaa laga qaboojin karaa heerkulka sare ilaa 20 ℃ si ku habboon loogu baakadeeyo 10-20min.
Composts Vacuum meeldhexaadka ah
Sharaxaadda Qaboojiyaha Vacuum
Qaboojinta Vacuum waa habka ugu habboon ee lagu qaboojiyo Composts gaar ah, waxay ku shaqeysaa uumibo deg deg ah oo biyo ah oo ka yimaada comboyada qaarkood iyadoo cadaadiska hawo aad u hooseysa ay ku jirto gudaha qolka faakiyuumka. Tamarta qaabka kuleylka ayaa looga baahan yahay inay ka bedesho biyaha dareeraha una badalaan xaalad uumiga sida kuleylka biyaha. Marka la yareeyo cadaadiska jawiga ee qolka faakiyuumka ayaa biyaha ku karkaraan heerkul ka hooseeya kan caadiga ah.
Ubax Qaboojiyaha Vacuum
Vacuum qaboojinta waa habka ugu wanaagsan ee lagu qaboojiyo ubax cusub oo go'an, wuxuu u shaqeeyaa uumibo deg deg ah oo biyo ah oo ka yimaada ubaxyada qaarkood hoosta cadaadiska jawiga aad u hooseeya ee gudaha qolka faakiyuuga Tamarta qaabka kuleylka ayaa looga baahan yahay inay ka bedesho biyaha dareeraha una badalaan xaalad uumiga sida kuleylka biyaha. Marka la yareeyo cadaadiska jawiga ee qolka faakiyuumka ayaa biyaha ku karkaraan heerkul ka hooseeya kan caadiga ah.
Geedaha Vacuum meeldhexaadka ah
Qaboojinta Vacuum waa habka ugu habboon ee lagu qaboojiyo geedo gaar ah, waxay ku shaqeysaa uumibo deg deg ah oo biyo ah oo ka yimaada geedo gaar ah iyo cows ku hoos yimaada cadaadis aad u hooseeya oo hawo leh gudaha qolka faakiyuuga Tamarta qaabka kuleylka ayaa looga baahan yahay inay ka bedesho biyaha dareeraha una badalaan xaalad uumiga sida kuleylka biyaha. Marka la yareeyo cadaadiska jawiga ee qolka faakiyuumka ayaa biyaha ku karkaraan heerkul ka hooseeya kan caadiga ah.
Mushrooms Qaboojiyaha Vacuum
Vacuum qaboojinta waa habka ugu wanaagsan ee lagu qaboojiyo boqoshaada gaarka ah, waxay ku shaqeysaa uumibo deg deg ah oo biyo ah oo ka yimaada likaha qaarkood iyadoo ay ku hoos jiraan cadaadis aad u hooseeya oo hawo leh gudaha qolka faakuumka. Tamarta qaabka kuleylka ayaa looga baahan yahay inay ka bedesho biyaha dareeraha una badalaan xaalad uumiga sida kuleylka biyaha. Marka la yareeyo cadaadiska jawiga ee qolka faakiyuumka ayaa biyaha ku karkaraan heerkul ka hooseeya kan caadiga ah.
Turfs Vacuum meeldhexaadka ah
Qaboojinta Vacuum waa habka ugu habboon ee lagu qaboojiyo cowska gaarka ah, waxay ku shaqeysaa uumibo deg deg ah oo biyo ah oo ka yimaada cowska qaarkood iyadoo ay ku hoos jiraan culeysyo hawo aad u hooseeya oo ku dhex jira qolka faakiyuunka Tamarta qaabka kuleylka ayaa looga baahan yahay inay ka bedesho biyaha dareeraha una badalaan xaalad uumiga sida kuleylka biyaha. Marka la yareeyo cadaadiska jawiga ee qolka faakiyuumka ayaa biyaha ku karkaraan heerkul ka hooseeya kan caadiga ah.
Foornada faakiyuumka buskudka
Waa maxay Qaboojinta Vacuum?
Tallaabada 1 Uumi-saarista qoyaanka ka soo baxa gudaha sheyga.
Tallaabada 2: Waxay ka qaaddaa tamar qaab kuleyl ah soosaarka cusub.
Tallaabada 3: Ka dhig dusha iyo udub dhexaadka badeecaddu inay si sax ah u gaadho
heerkul isku mid ah ka dib qaboojinta faakiyuumka.
Cunnooyinka Steamed Vacuum Qaboojiyaha
Steam Cuntada Vacuum meeldhexaadka ah Faahfaahin kooban
Hilibka la kariyey ee Qaboojiyaha
Vacuum meeldhexaadka ah waa tiknoolajiyad qaboojin uumi baxsi deg deg ah leh. Waxay hoos u dhigeysaa cadaadiska qolka iyada oo la marinayo mashiinka faakiyuumka si dhibicda karkaraya ee biyaha ku jira badeecada ay hoos ugu dhacdo si ay u ahaato mid uumi baxa biyaha si ay u soo nuugaan badeecada laftooda 'kuleylka, ka dibna loo yareeyo alaabada'
heerkul degdeg ah. Faa'iidooyin badan ayaa ku jira qaboojinta dabiiciga ah iyo qaboojinta guriga qaboojiyaha.
Khudaarta qaboojiyaha faakiyuumka
Waa maxay qaboojiyaha faakiyuumka?
tikniyoolajiyadda qaboojinta faakiyuumka way ka duwan tahay qalabka caadiga ah ee qaboojiyaha, waa qalab qaboojin qabow leh, oo leh dheef deg deg ah, labis iyo nadiif nadiif ah. Hoos u dhaca heerkulka iyada oo la adeegsanayo qaboojiyaha faakiyuumka waxaa lagu gaarayaa uumibo deg deg ah oo biyo ah marka cadaadiska hawo ee gudaha qolka lagu yareeyo bamka faakiyuumka. Guud ahaan, waxay qaadataa 30 daqiiqo oo keliya si loo gaaro heerkulka kaydinta ee ugu habboon illaa 5 digrii.